မြန်မာ အတိုက်အခံတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ (၃) ~ Myanmar Express
၁။ မြန်မာစစ်တပ်က ဘုန်းကြီးတွေကို တကယ်ပဲ သတ်ခဲ့ပါသလား?? ဘယ်လိုသတ်ခဲ့ပါသလဲ?? သေနတ်နဲ့ပစ်ခဲ့ရင် ပစ်နေစဉ် ဓာတ်ပုံ (သို့) ဗွီဒီယိုဖိုင် တစ်ခုလောက် ပြပေးပါ၂။ သင်္ဃန်းဝတ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ရဟန်းမြည်ပါသလား??၃။ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ လူကောင်းတွေချည်းမရှိပဲ လူဆိုးတွေပါ တွဲပြီး ရှိနေတတ်ရာ ဘုန်းကြီးတွေထဲမှာရော သင်္ဃန်းဝတ်နဲ့ မလျှော်ညီ မထိုက်တန်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ မရှိတော့ဘူးလား?? ရှိခဲ့ရင် အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကို ဘယ်သူတွေက ပြောဆိုဆုံးမမှာလဲ?? ပြောဆိုဆုံးမ တားမြစ်နေတဲ့ သံဃာအကြီးအကဲတွေရဲ့ စကားကို နားမထောင် ဆန့်ကျင်နေရင်ရော ဘယ်သူတွေက ထိန်းမှာ လဲ ??၄။ သင်္ဃန်းဝတ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ကိုယ်တိုင်က သာသနာကို အရောင်တောက်အောင်မလုပ်တဲ့အပြင် ငြိုးးမှိန်အောင်လုပ်နေရင် ဘယ်သူက သာသနာကို အရောင်တောက်အောင်လုပ်မှာလဲ??၅။ သင်္ဃန်းဝတ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကိုယ်တိုင်က သက်တော်၊ ၀ါတော်ကြီးသော ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ စကားကို ဆန့်ကျင် ပြီးလုပ်ချင်တာလုပ်နေရင် ဘယ်သူတွေက တားဆီးနိုင်အုံးမှာလဲ??၆။ မာတုကာမဓာတ်ပုံကိုင်ပြီး ဆန္ဒပြတာ သံဃာတဲ့လား??၇။ စိတ်ပုတီးမစွတ်ပဲ လက်ထိပ်စွတ်တာ သံဃာလား??၈။ သာသနာအလံဆိုတာ ဆန္ဒပြချိန်မှာ လွှင့်ထူဖို့လား??၉။ သပိတ်နဲ့ ယက်တောင်အစား မာတုကာမ နာမည်သာကိုင်ပြီး စီတန်းလမ်းလျှောက်တာ သံဃာလား??၁၀။ စိပ်ပုတီးနဲ့ တရားစာ အစား မာတုကာမ နာမည်ကိုင်ပြီး လူတွေနဲ့ တန်းတူထိုင်တာ သံဃာလား??၁၁။ ဒါက သာသနာပြန့်ပွားအောင်လုပ်တာလား??၊ သာသနာငြိုးမှိန်အောင်လုပ်တာလား??၁၂။ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာဘုန်းကြီးဆိုတာ ဒါမျိုးလား??၁၂။ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာဘုန်းကြီးဆိုတာ ဒါမျိုးလား?? ၁၃။ သံဃာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ နှာခေါင်းစီးနဲ့ ၀ါးရင်းတုတ်ပါလား??၁၄။ ကားမှန်တွေ ခွဲပြီးထွက်ပြေး သူများက ဘုန်းကြီးတဲ့လား??၁၅။ ဒီဘုန်းကြီးက ပျက်ဆီး လောင်ကျွမ်းခြင်း တရားသဘောကို ကျင့်နေတာလား??၁၆။ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ တိုင်ပင်တာလား?? တရားဟောနေတာလား??၁၇။ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး အော်ဟစ်တာ ဘုန်းကြီးလား??၁၈။ ဒီလို လူတလှည့် ဘုန်းကြီးတလှည့် နဲ့ သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ လူတွေကို တားဆီးဖို့ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ?? ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို ၀င်ရောက်ထိမ်းသိမ်းသင့်သလဲ??၁၉။ ဒီနေရာနဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ ဘယ်လိုသက်ဆိုင်တာလဲ?? ဒီဘုန်းကြီးက မသက်ဆိုင်ပဲလားတာလား?? ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအားလုံးက သက်ဆိုင်ရက်သားနဲ့ မလာကြတာလား??၁၉။ ဒီနေရာနဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ ဘယ်လိုသက်ဆိုင်တာလဲ?? ဒီဘုန်းကြီးက မသက်ဆိုင်ပဲလားတာလား?? ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအားလုံးက သက်ဆိုင်ရက်သားနဲ့ မလာကြတာလား??၂၀။ မာတုကာမကို ဦးချတာတော့ မလွန်လွန်းဘူးလား??ိ၂၁။ အဲ့ဒီ ဘုန်းကြီးတွေ အထက်ကနေ ဦးချခံရတဲ့ မာတုကာမဆိုတာ တိုင်တပါးသားတွေရဲ့ ပေါင်အထက်မှာ ထိုင်လာတာဆိုတာ မသိကြလို့လား??၂၂။ တိုင်းတပါးသားတွေရဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်လာတဲ့ မာတုကာမ က ကော်ဇောပေါ်ထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ သီလရှင်တွေကို ကြမ်းပြင်မှာထိုင်ခိုင်းထားတာ အမြင်တော်ရဲ့လား ??၂၃။ တိုင်းတပါးသားတွေရဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်လာတဲ့ မာတုကာမကို ဘုန်းကြီးတွေရော လူတွေရော ၀ိုင်းကန်တော့ကြတာ အမြင်တော်ရဲ့လား?? နိုင်ငံရေးသမားတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ (၁) မြန်မာ အတိုက်အခံတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ (၂) အမြင်မရှင်းသည့် မေးခွန်းများ (၄)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မေးခွန်း (၅၅) ခု
Posted in: မြန်မာ အတိုက်အခံတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ (၃)
5 April 2011 07:51
အဲဘွားတော်(စုကြည်)ကြီး အခြား နိင်ငံခြားသားတွေပေါင်ပေါ်ကျ တက်ထိုင်တယ် စောက်ဖုတ်ကြီးကတော့ သေချာတယ် တစ်ယောက်တည်း လိုးတာတော့မဖြစ်နိင်ဘူး .....စောက်ရမ်းရိုင်းသွားရင် တောင်းပန်တယ် စာဖက်ပရိတ်သတ်ကြီး ကို တော်တော်လေးကို သူ့ကိုကြည့်ပီး စောက်၇မ်းရင်နာလို့ပါ မြန်မာနိင်ငံ မှာကျ သက်ကြီးရွယ်အို သက်တူတွေကပါ မကျန်(ယောင်္ကျား။မိန်းမ) ရဟန်းသံဃာ တွေကပါ လက်အုပ်ချီ အမြင့်နေရာမှာထိုင်ခိုင်း ....အဲလို စောက်ဖုတ်မကြီးက ဘာဖြစ်လို့ အခြားလီးကြီးတဲ့ကောင်တွေကျ ပေါင်တွေပေါ်ထိုင်တာ လည်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးစောက်ရမ်းရင်နာတယ်......မြန်မြန်တာသေပါတော့..အဲဒီအဘွားကြီး
စောက်ရူး က တစ်မျိုး ခုမှ ဘာသာတရား လာကိုင်းရှိုင်းပြနေသေးတယ်--အိမ်က ဘုရားတောင် နက်မှန်အောင်ရှီခိုးရဲ့ လားမသိဘူး..။ဘာသာတရား ကိုစော်ကားနေတာ ပိုစ် တင်တဲ့ သူ မဟုတ်ဘူး..။ ဘုန်းကြီး အရေခြုံထားတဲ့ကောင်တွေ ..။သူများဘာသာ က ကိုယ့်ဘာသာ ကို အထင်သေးမှာကြောက်ရင်-- ဘုန်ကြီး စိစစ်ရေး နဲ့ သံဃာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက် ..။သင်္ကန်းလေးခြုံပြီး-- ည ဘက် အပြင်ခိုးထွက် အ၀တ်လေး လဲ အရက်ခိုးသောက် မဟုတ်တဲ့မိန်းမ အိမ်သွား အဲ့တာလား ဘုန်းကြီး---
FUCK OFF SUU KYI CUNT LICKER KO KO...
ကိုကိုဆိုတဲ့မောင်အဲလိုတင်ပေးတာအလကားတင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး စစ်သား ကဘုန်းကြီး၇ိုက်တယ် ထောင်ချတယ် တော့ပြောကြတယ် အဲဘုန်းကြီးက အဲလိုအပြုအမူတွေနှုတ်ကြမ်းကြမ်းလျှာကြမ်းကြမ်းလုပ်နေတာတွေကျ လူတွေကမသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး ဘေးကနေလက်ခုပ်လက်မောင်းတီပီးအားပေးအားမြောက်ပြုနေကျတာကော မသိတာလား နားမလည်တာလား အနေတာလား ပြောပါအုံး အဲလိုတင်ပေးတာ ဗုဒွဘာသာကို ချိုးနှိမ်ထားတာမဟုတ်ဘူး ငါတို့ ဗုဒွဘာသာထဲမှာအဲလို ဆွမ်းမလောင်းသင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ မတန်တဲ့ မ၇ှိခိုးထိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေ၇ှိနေသေးတယ်ဆိုတာ ငါတို့ လူမျိုးတွေသိအောင်ဆင်ခြင်နိုင်အောင်တင်ပေးနေတာ အလကားကောင် ဆောက်၇ူး ဘာသာသာသနာဆိုတာ ပြန်ပွားဖို့ ဆိုတာ ထွန်းလင်းတောက်ပြောင်ဖို့ဆိုတာ အဓိက ၇ဟန်းတွေဘုန်းကြီးတွေမှ မလုပ်၇င်ဘယ်သူလုပ်မှာလည်း အဲလိုလူတွေက သာသနာအတွက်မလုပ်ပဲလမ်းဘေးေ၇ာက်နေတာ ကျတော့မင်းတို့ ကကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်နေတာလား ဆောက်၇ူး၇ဲ
6 April 2011 17:56
ဒါဆိုမင်းကို ငါတစ်ခုပဲမေး မယ် ခုလိုဆန္ဒပြနေတဲ့ဘုန်းကြီးလက်သီးလက်မောင်တန်းပီး ဖျက်လို့ ဖျက်ဆီးလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ လမ်းဘေးမှာ ဆဲေ၇းတိုင်းထွာဆန္ဒပြနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ သာသနာအလံကိုင်းပီး ဆူပူမှု့ လုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလုပ်ရပ်ဟာမှန်လားမှားလား မင်းဖြေစမ်းပါအုံး ခုလုပ်ရပ်တွေဟာ ဘုန်းကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်သင့်လားမလုပ်သင့်ဘူးလား မင်းဖြေစမ်းပါအုံး တင့်သင့်မတင်သင့်ကိုငါမမေးသေးဘူး တင်ထားတဲ့ပုံထဲကလုပ်ရပ်တွေဟာဘုန်းကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်သင့်လားမလုပ်သင့်ဘူးလား ဆိုတာပဲပြန်ဖြေစမ်းပါကွာ ငါဖြေမဲအဖြေကိုစောင့်နေမယ်အိုကေလား
6 April 2011 18:13
(ကိုကို) ဗုဒ္ဒဘာသာအကြည်ညိုမပျက်၇အောင် အဲလိုမကြည်ညိုထိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကို ၇ှင်းလင်းပြစ်၇မယ် ထိုင်ကြည့်နေလို့ မ၇ဘူး ဒီပို့ စ်တင်လို့ သာသနာမပျက်ဘူး ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ နေတဲ့ဘုန်းကြီးတိုင်း သီလသမာဓိ၇ှိ၇မယ် သီလသမာဓိမ၇ှိတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ယောက်၇ှိ၇င်သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအကျင့်သီလပျက်မယ် အေးအဲလိုပဲ (အတွင်းလူ)ဆိုတာမင်းနာလည်းမှာပါ သင်္ကန်းဝတ်တာကတော့ကွာ သင်္ကန်းဆိုင်တွေတစ်ပုံကြီး ၀ယ်ပီး ကတုံးတုန်းလိုက်၇င်ဘုန်းကြီးဖြစ်တာပေါ့ အေး အဲလိုမျိုးဘုန်းကြီးကို ဘယ်တော့မှထိုင်မ၇ှိခိုးဘူးကွ မင်းလိုလူဘိန်းတစ်ယောက်ကိုပြောပြမယ် လူတစ်ယောက်ကိုဆိုဆုံးမမဲ့လူတစ်ယောက်က ကိုယ်တိုင်းလည်းအကျင့်သီလ ကောင်း၇တယ် သိက္ခာ၇ှိ၇တယ် သူများပြောစ၇ာမဖြစ်အောင်နေမှတစ်ခြားသူကိုဆိုဆုံးမလို့ ၇တယ် ဒီလိုမှမဟုတ်၇င် ဘယ်သူမှာနာခံမှာမဟုတ်ဘူးမင်းနာလည်းထား ငါတို့ဘာသာသာသနာစည်ပင်ပြန့် ပွားဖို့ က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အကျင့်သီလ မ၇ှိပဲသင်္ကန်ချုံထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကို ၇ှင်းလင်းမှ ငါတို့ သာသနာတိုးတက်လာမှာပဲ မင်းစကားပြောရင်ဒဲ့ပြောစမ်းပါကွာ မင်းကြောက်နေတာလား စစ်သားဆိုစစ်သားပေါ့ကွာ စစ်တပ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲဖွဲ့ စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာတစ်နိုင်ငံထဲ စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး နွားလေးရ စစ်တပ်ထဲမှာစစ်သားတိုင်းမင်တို့ လိုကောင်တွေထက် ဘာသာတ၇ားကိုင်း၇ှိုင်းတယ် (( မင်းညီမကိုဘုန်းကြီးတစ်ယောက်ခိုးပြေးသွားတော့မှပဲ သူအကုသိုလ်အလုပ်က သူတို့ ပဲခံရမှာပဲဆိုပီးထိုင်ကြည့်နေပေါ့ကွာ))ဟားဟား
6 April 2011 20:15
ဒီခေတ်မှာ ယောက်ကျားတွေ နှုတ်သီး ပိုကောင်းလာကျတယ်..:Dအထူးသဖြင့် ဒီမိုတွေ..လုပ်တာကနည်းနည်း ပြောတာကများများ..မပြောတာ့ပါဘူး.ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တာကောင်းတယ်..
(ကိုကို)မကောင်းကြောင်းမပြောလို့ သာပဲ ဟားဟား ပြောပါသေးတယ်နိုင်ငံေ၇းသမားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟားဟားဒီမိုဒီမို ကမ္ဘာာကိုကြေငြာတာတယ်လို့ တောင်ပြောနေသေးတယ် ကမ္ဘာမှာမြန်မာတွေသိက္ခာကျနေတာ မင်းတို့ လိုကောင်တွေ၇ှိနေလို့ ဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးအချင်းချင်းမထိန်းနိုင်လို့ ဝင်ထိန်းပေးနေ၇တာ ဘုန်းကြီးက နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတစ်ယောက်နာမည်တပ်ပီး စော်ကားနေတာကို တာဝန်၇ှိသူတွေက လက်ပိုက်ကြည့်နေ၇မှာ ဘုန်းကြီးက အက်စစ်နဲ့ ပက်တာခဲနဲ့ ထုတာ ထိုင်ကြည့်နေ၇မယ်ပေါ့အဲလိုလား လူသတ်သမားလူသတ်သမားနဲ့ ပါးစပ်ကကိုမချပါလားလူသတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စားတယ်တဲ့ဟားဟားသေချာပါတယ်ကွာမင်းက KNU တို့ DKBAတို့ ထဲကတစ်ယောက်ယောက် သားဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟားဟား ဒါမှမဟုတ် ဒေါ်ညုသားသမီးတွေထင်တယ်ဟားဟား မိုက်ကယ်အဲရစ်သားလေးထင်တယ်ဟားဟား သားလေးမင်းပေါက်ကရတွေလျောက်မေ၇းနဲ့ ကွာ အလကားပို့ စ်မှာ၇ှုပ်တယ် မင်းစာတွေ
6 April 2011 21:47
ယခုလတ်တလောအဖြစ်အပျက်လေးပေါ့ဗျာ..အစိုး၇ကိုအပုပ်ချဖို့ အတွက်သင်္ကန်းကိုအသုံးချပြီးလုပ်စားတဲ့ဗွီဒီယိုပေါ့..၇ည်၇ွယ်ချက်၇ှိ၇ှိ၇ိုက်ထားတာပါ..No video results for “http://www.youtube.com/watch?v=LzArZQZtpwE&feature=player_embedded”ပီပြင်လို့ ယူကျုကတာဝန်၇ှိသူတွေတောင်ဖျက်လိုက်၇၇ှာတယ်..ဒီမိုသတောင်းစားတွေ၇ဲ့ ကြိုးစာမှုပေါ့..ကိုကိုဆိုတာကhttp://forverfriends.ning.com/ကလာမသိဘူး..မင်းတော်တော်ဘာသာတ၇ားကိုင်း၇ှိင်းတာပဲ..[အကြောင်းမသိသူအတွက်ပေါ့ကွာ.ဟဟ..်..မင်း၇ာဇ၀င်တွေကိုတော့လောလောဆယ်မေ့လို့ မ၇သေးဘူးနော်..မင်းအဲဒီမှာလဲအဆင့်မ၇ှိသေးပါဘူး..လုပ်လိုက်တိုင်းစောက်တလွဲချည်းပဲ
6 April 2011 22:42
ဟားဟား မင်း လူပျက်လုပ်၇င်တော့တော်တော်နာမည်ကြီးမယ် ငါခုမင်းေ၇းတာဖတ်ပီး အူတက်အောင်၇ည်နေ၇တယ်ကွာ ဟားဟား မင်းက(နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးနဲ့အလုပ်ကျွေးပြုနေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ)ဟားဟား ငါမင်းကိုပြောပါတယ် ပြောပြန်၇င်လည်းကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရာကျနေမှာစိုးလို့ ဟားဟား မင်းပြန်၇င် ဘာယူနီဖောင်းဝတ်မှာလည်းသေချာလည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်မေးအုံးဟ စွတ်စက်ပီးကွန်းမန့် ပေးမနေနဲ့(စစ်စိမ်းမ၀တ်ချင်၇င် တပ်မတော်ကထွက်လိုက်ဟုတ်ပီလား ဘာလို့ စစ်ထဲဝင်လာသေးလည်း )ငါပြောပြမယ် DSMA ကအရာ၇ှိလည်း စစ်ဗိုလ်ပဲDSTA ကအရာ၇ှိလည်း စစ်ဗိုလ်ပဲ DSA ကအ၇ာ၇ှိလည်းစစ်ဗိုလ်ပဲ TA မို့ လို့ လစာ ပိုပေးထားတာမ၇ှိဘူးသူ့ ၇ာထူးအဆင့်အတန်းလိုက် ပေးထားတာ စစ်စည်းကမ်းကလည်း မင်းတို့ အတွက်ဆိုပီးသီးသန့် ထုတ်ထားတာမ၇ှိဘူး ၇ိက္ခာလည်းမင်းတို့ အတွက်ဆိုပီး သီခြားသတ်မှတ်ပေးထားတာမ၇ှိဘူး ကွ အော်မင်းက (စစ်သာစိတ်ပျောက်နေပီ )ငါ့ကွ စစ်ဆေးကပြောရင်ငါလက်ခံပါတယ် မင်းတို့ TA ကအရာ၇ှိတွေ တပ်တွေမှာပွဲပျက်နေတာ မင်းမသိတာလား မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား ခြေလျင်နဲ့ တွဲဖက်ယူနေတဲ့တပ်တွေ မှာကျတဲ့မင်း သူငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်ဟုတ်ပီလား ( ငါစေတနာနဲ့ ထပ်သတိပေးလိုက်မယ်ကွာ တပ်မတော်လစာကိုယူထား၇င် စစ်စိမ်းဝတ်ထား၇င် စစ်တပ်ထဲမှာ မင်းအကောင်းဆုံးနေချင်၇င် စစ်သားစိတ်လုံးဝ(လုံးဝ)မပျောက်စေနဲ့ အိုကေလား ငါ(49) မင်းငါထက်ကြီးမယ်ထင်တယ် တစ်ခြားသူဆိုထားတော့ငါအချင်းချင်းတွေပြန်မပြောချင်ဘူးကွာ ဒါပါပဲ အိုကေလားသူငယ်ချင်း
7 April 2011 02:33
မရေးတာတော့ကြာပြီးရေးလိုက်အုန်းမယ် .....ကိုကို က TAကဆိုတာ မယုံပါနဲ့ ....ညာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်....TA ကဆိုရင်တော့ (ငါက လူသတ်စားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး နားလည်လား ။ နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးနဲ့အလုပ်ကျွေးပြုနေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ ...သဘောပေါက်)ဒီစာသားက တော်တော်မိုက်တယ် ...ဒီလို့ခံယူချက်ရှိရင်ဘာလို့ "တပ်မတော်အင်ဂျင်နီယာ"ကို လာတက်လဲဗျာ ရိုးရိုးအင်ဂျီနီယာလုပ်ပေါ့ ....တပ်မတော်ကကျွေးတာတွေစားထားပြီးတော့ စစ်ကျတော့မတိုက်ချင်ဘူး ဘယ်လို့ခံယူချက်နဲ့ စစ်တပ်ထဲဝင်လာတာလဲ....လေးစာပါတယ် တပ်မတော်အင်ဂျင်နီယာကလို့ပြောတော့ ကိုကို ရေးးးးးးးးးးးးပြောလိုက်အုံန်းမယ် ...တပ်မတော် ဆိုတာ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုတည်းနော်....မှတ်ထားလိုက်အုန်း မကြာခင် စစ်စိမ်းရောင်ဝတ်ပြီ ငါက အင်ဂျင်နီယာက စစ်ဗိုလ်လို့ ဂုဏ်ယူတော့မှာမလို့ ပြောလိုက်တာ ပါ.....စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ ....
7 April 2011 05:09
ကြားထဲကနေ Anonymous ကနေ ဗိုလ်ကြီးကိုကိုကိုလေးစားနေတယ် ကိုရေးတဲ့ကွန်းမန့် ကိုကိုပြန်လေးစားပီးသူများေ၇းသလိုအထာနဲ့ မင်းမိုလို့ မ၇ှက်တယ်ကွာ မင်းတို့ ကောင်တွေမှတ်ထားဖို့ က စစ်စိမ်းဝတ်ထားတဲ့စစ်သားမှန်သမျှဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်၇ဲ့ လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေပဲစစ်သားက စစ်သားစိတ်ဓာတ်ရှိ၇မယ် အခြောက်လိုလို ငါကဘာ ငါကညာလုပ်နေ၇င်စစ်တပ်ထဲဝင်ကိုမလာနဲ့ မင်းတို့ ကောင်တွေကြောင့်ငါတို့ စစ်တပ် သိက္ခာကျတယ် စစ်သားစစ်တိုက်၇မှာကြောက်နေ၇င်စစ်တပ်ထဲဝင်မလာနဲ့ စစ်တပ်ကပေးတဲ့လစာ လိမ်စားမနေနဲ့ မင်းအတွက် ပေး၇တဲ့လစာ သူတောင်းစားပေးလိုက်၇င်တောင် အကျိုး၇ှိအုံးမယ်
ကိုကို မင်းက TA ကလား ဟုတ်မှလဲပြောပါကွာစောက်ရှက်မရှိ လာပြောနေသေးတယ် လုံးဝမင်း အဲဒီကျောင်းဆင်းမဖြစ်နိင်ဘူး မင်းဟာ ဒေါ်လား တောင်းစားတဲ့ လူတွေထဲက တစ်ယောက်ဆိုတာ ငါသေချောပေါက် ပြောရဲတယ် ဒီဆိုဒ်က အခြား ဆိုဒ်တွေက ဟာတွေကို မှက်ပီးမှ ဒါလားဘုန်းကြီးဆိုပီးမဖြစ်သင့်တာတွေပဲပြောပြတာ ထောက်ပြတာ ဆိုတာစာဖက်တဲ့သူငယ်ချင်းအားလုံးနားလည်ထားပီးသား ဘုန်းကြီးတွေကို ဆော်ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူး ..မဟုတ်တာတွေတော့ မပြောပါနဲ့ကွာ သေချာတာ တခုပြောလိုက်မယ် စစ်သားတွေက ပိုပီးဘုရားတရား လေးစားတယ် ဘာဖြစ်လို့ ပိုပီး လေးစားတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မရေးပြလည်းသိ့ပါတယ် (ကိုယ့်အိမ်မှာ ကို့သားလေးအခြားနိင်ငံ ကျောင်းသွားတက်ရင်တောင် အမေ အဖေ တွေက ဘုရားမှာ ငါ့သားလေးကျန်းမာပါစေ ကျန်းသာပါစေနဲ့ မောင်နုမတွေကလည်း အဲလိုပဲဆုတောင်းမှာပဲ အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေပေါ့....) စစ်သားတွေ ရှေ့တန်းထွက်လို့တိုက်ပွဲတွေတိုက်နေရရင် အိမ်က မိသားစု ဘယ်လောက်တောင် ပူဆွေးရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားတာကြည့်ပါ ..လူတိုင်း ဘုရားတရားကို လေးစားကြတာတော့ သေချာပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒေါ်လာစားထဲက အခြားဘာသာခြားတွေလည်းရှိတော့ သူတို့တွေ ဘုန်းကြီးတွေ ကို လုပ်ခိုင်းတာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးး) ဘယ်သူတွေက သာသနာ ကို ဂုဏ်ငယ်အောင်လုပ်နေကြလည်း စဉ်းစားကြပါ..နိင်ငံရေး ဒေါ်လာစားအများစု ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေရှိသလိုအများအားဖြင့် အခြားဘာသာခွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ...ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင် အခြားဘာသာခြားလူမျိုးခြား ..ကို............................
8 April 2011 23:33
ကိုကိုဆိုတဲ့လူ ခင်ဗျားတော်တယ် အိမ်ကြက်ချင်းအိုးမည်းသုတ်ပေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လဲ အထိုက်အလျှောက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်မင်း TA ကလို့ ကြွေးကြော်လို့ မေးချင်ရဲ့ ကွာမင်း Intake နဲ့ Cadet No ကိုပြောရဲတဲ့ သတ္တိရှိရင် မင်းရာဇ၀င်ကို နာရီပိုင်းအတွင်းငါချပြနိုင်တယ်
10 April 2011 02:39
(ကိုကို)ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း မင်းသိပ်ကို အချင်းချင်းကိုက်ပြမနေနဲ့ မင်းကျောင်းဘယ်မှာလဲ နာမည်ဘယ်သူနဲ့ နေ၇ာပြောလိုက် မနက်ဖန် ငါလာခဲ့မယ်..မင်းကဘာကောင်မိုလို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေတာလဲ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇေယျာအောင်ဘု၇ားစင်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကလဲ အဲဒီတုန်း အခန်းမှာ ဘု၇ားစင်းမီးကနေမီးစလောင်လို့ရာယီခဏဖြုတ်ခိုင်းတာ ဒီအတိုင်းကိုးကွယ်တာမကိုးကွယ်နဲ့ အမိန့်ထုတ်တာမင်းကြားဖူးလား...ကြာတယ်ကွာမင်းဘယ်နေရာမှာဆုံချင်သလဲသာပြောချက်ချင်းလာခဲ့မယ်အိုကေလား............
10 April 2011 02:48
10 April 2011 16:00
သိပ်ပြီးသွေးပျက်မနေနဲ့ငါစစ်သားကွမင်းတို့ က အရာရှိအချင်းချင်းတောင် ရန်စောင်နေကြပါလား ။ ငါကစပြီး ပြသနာလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ပထမဆုံးကွန်မန့် ကိုဖတ်ကြည့်။ ငါ့ကို လာစော်ကားလို့ ရေးဖြစ်နေတာ။ ရှင်းဒယ်နော်
13 April 2011 20:20
ဘာမှ ဒီကောင်.စစ်သားမဖြစ်နိုင်ဘူး ကိုကို ဆိုတဲ့ ငနဲ မင်းကို နည်းနည်းလောက်တော့ မေးချင်သေးတယ်....မင်း ငါ့ကို နည်းနည်းရှင်းပြစမ်းပါ မင်းအစွမ်းအစနဲ့...ငါတို့ကို လူသတ်စားနေတဲ့ကောင်တွေလို့ပြောရအောင်...မင်းအမျိုးတွေပါလား.လူကောင်းတွေ ကိုငါတို့သတ်ခဲ့တာ ရှိလား..မင်းမြင်လား...မင်းဆိုတဲ့ကောင် လူမဖြစ်ခင် မင်းအဖေ ကမင်းအမေကို နောက်ပိုးကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်အောင်မင်းဆိုတဲ့ကောင်ဖြစ်လာအောင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံး..အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်အောင် ငါတို့ပိုင်တဲ့မြေ ငါတို့နိုင်ငံသူများလက်ထဲ မရောက်အောင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မင်းအခုပြန်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ မြေပုံလေး ရှိနေအောင် တပ်မတော် ကစောင့်ရှောက်လာတာကွ...အဲဒါကို မင်းမသိဘူးလား..ငါတို့ကို မင်းက လူသတ်ပြီး အသက်မွေးတဲ့ကောင်ပြောရအောင်..ငါတို့ တပ်မတော်သားတွေ က လောကကြီးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အကျိုးပြုနေတဲ့ လူသူတော်ကောင်းကို သတ်ခဲ့တာ မင်းမြင်ဘူးလား..ကို့ကိုကို ဘယ်က ဘယ်လိုလူဖြစ်လာမှန်းတောင် မင်းသိရဲ့လား.. မင်း စစ်သား ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် ငါ စိတ်မဝင်စားဘူး.. မင်းသိထားဖို့က ငါတို့ တပ်မတော် က နိုင်ငံတော်ကို စောင့်ရှောက်နေတာ အထက်ကလူကြီးတွေကိုလည်း စောင့်ရှောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး...ငါတို့ ရင်ထဲမှာ ငါတို့နိုင်ငံဘဲရှိတယ်..ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက် ကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်နေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘဲ မင်းတို့လို လူဘိန်းတွေဒါကို မသိဘဲ..ကရောင်ကတမ်း ဝါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းနေတိုင်း.. မင်းအကောင်းထင်မနေနဲ့ မင်းဘာသာ ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်..မင်းဟာ နိုင်ငံတော် အတွက် ပြည်သူတွေအတွက် အလကားသုံးမရတဲ့ ကောင်ဆိုရင် ..မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မနက်ဖြန်အတွက် မင်း လိုကောင်ကို အရင်ဆုံး ဒီလူသတ်ပြီး အသက်မွေးတဲ့ကောင်တွေက လာသတ်မယ် ဆိုတာ မင်းသဘောပေါက်ထား....
8 May 2011 22:17
မည်သူမဆို ( ဘုန်းကြီးဝတ် နဲ့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်။ လူဝတ် နဲ့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် )အမှန် တကယ် တ၇ားကျင့် နေသော ။တရားထူးတရားမြတ် ကို ထိုက်သင့် တဲ့ အဆင့် ထိသိနေပါပြီဟု မိမိ ကိုယ် မိမိ ယူဆထားသော လူသား။ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် သည် မြတ်စွာ ဘုရား တရား တော် ကို အမှန် တကယ် လိုက်နာ ကျင့်သုံး သူ သည်လောဘ။ဒေါသ။မောဟ။ အလွန် နည်းသင့် ပါတယ်။နှုတ်တစ်ရာ။ စာ တစ်လုံး ။ စကားစကားပြော ပါများ။ စကား ထဲက ဇာတိပြ။စာရေး တတ် တိုင်း ။ စာတွေ ရေးပါ များ။ စာ ထဲက စရိုက်ပြ။ကမ္ဘာကြီး က ရွာကြီး ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် မှာ ၀ါဒ ဖြန်ဖို့။ ပြန်လည်ချေပ ဖို့။ငါ နှင့် ငါ သာ နှိုင်းစ၇ာ လို့ သွေး နားထင်ရောက်။မြန်မာလူမျိုး အများစု့ ဖောင်စီး ရင်း ရေငတ်ဘ၀ မျိုး မဖြစ်စေချင်ပါ။ အကြင်သူတော်ကောင်း အပေါင်း တို့ ရေ====သာသနာ ကွယ် ခါ နီး နမိတ် တွေ လိုဘဲ ယူဆပါတယ်။ကျမကတော့ မည်သူမည်ဝါ၏ ဘက်တော်သား မှ့ လဲမဟုတ်ပါဘူး။မိမိ ကိုယ်ပိုင်ညဏ် ဖြင့် ချင့် ချိန် ဝေဖန် နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ပညာတတ် သူတစ်ယောက်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ထေရ၀ါဒ ကို အမှန် အကန် လိုက်နာ လေ့လာ ကျင့်သုံး သိရှိနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတိုင်းကိုလဲ ဦးမချဘူးသလို။ဆရာ တိုင်း ကိုလဲ အရိုအသေ မပြုဘူးသူတစ်ယောက်ပါ။သူတော်ကောင်း အစစ် ကို တကယ်တွေ့ ရင်လဲ လေးစားဖို့ ၀န်မလေးပါ။ဘာသာရေး ဆိုတာ။တရား ဆိုတာ ။ဘာမှန်း ငယ်ငယ် ကလေးထဲက မသိ ခဲ့ ဘူးသောကမ္ဘာကျော် မီလျံနာ ကြီး ဘီးဂိတ် လိုလူမျိုးမြန်မာပြည်မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသလဲ။သူလုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်တွေ ကို ကြည့်ပြီး များ တ၇ားတရား အော် နေကြသူများ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်အင်း အချိန်ကုန်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဝေဖန်စရာ မရှိပါ။သံဃာ့ဂုဏ်။ သမားဂုဏ်။ နာယက ဂုဏ်။ ဘယ်လောက် နဲ့ ညီသလဲဆိုတာကိုဘဲ ချိန်ထိုးတွက်ဆသူဖြစ်ပါတယ်။
19 June 2011 02:03
ကိုကိုဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ ဒုတိယစိုင်းသိန်းဝင်းဖြစ်မယ့်ကောင်နဲ့တူပါတယ်ကွာ... ဟုတ်တယ်လေ... သူတို့ကလူသတ်မစားဘူး... လေနဲ့ညာစားမယ့်ခွေးမျိုးတွေ...စိုင်းသိန်းဝင်းနောက်လိုက်မယ့်ကောင်းပဲဖြစ်မှာပါ... မင်းလိုပဲကွ ငါလဲ ၇လပိုင်းပြန်မယ့်တယောက်ပါပဲကွာ..။။
16 November 2011 19:04
့ကိုကို ဆိုတဲ့ ကောင် ငါထင်တာပြောရရင် unnormal (ဂေါက်)နေတယ်ထင်ပါတယ်ကွာ...အလကားစောက်ရူးပါ၊ပြောသေးတယ် ဘာတဲ့ (နိုင်ငံတော်တညိဆောက်ရေးနဲ့ အလုပ်ကျွေးပြုနေတာ) ဆိုပဲ.. ဟားဟားmr bean တောင်မင်းလောက်မရီရ၀ူးစောက်ပေါ....မင်းကဒီစကားပြောရအောင်တန်လို့လားမင်းဆောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော် ကြိုးပြု အဆောက်အဦး..လမ်းတံတား..ဘယ်နှစ်ခုရှိလို့လဲ.. ဘိလပ်မြေတောင် သေချာစပ်တယ်လို့လား...စောက်ကြီးစောက်ကျယ်သိပ်မပြောနဲ့ နားခါးတယ်မင်းကစစ်သားတွေကိုလူသတ်စားတဲ့ကောင်တွေလို့ပြောရအောင် မင်းရောစစ်သားမဟုတ်ဝူးလားအေးမင်းစစ်သားမဟုတ်ဝူးဆိုလဲသိအောင်တော့ပြောရဦးမယ် ငါတို့ဆောင်ပုဒ်ကရဲသော်မသေ သေသော်ငရဲမလားပဲသေခါနီလဲမင်းပြောသလိုဆွေးနေမယ်တော့မထင်နဲ့အဲဒီလိုဆွေးမှာ မင်းလိုအခြောက်စိတ်ရှိတဲ့ကောင်ပဲနေမှာ ၇ လပိုင်းကုန်လို့ မင်းပြန်လာရင်လေယဉ်ကွင်းမှာဖြစ်ဖြစ် ဆုံချင်ပါရဲ့ မြင်ဖူးချင်လို့ စိတ်ပုတီးကြီး လည်ပင်းမှာဆွဲထားလားလို့စဉ်းစားတာတွေများနေရင်လဲ enervoncy လေးဘာလေးသောက်စိတ်ပြေလက်ပြောက် အားကစားလေးဘာလေးလုပ်သိတယ်မလား တော်ကြာ စိတ်ပုတီးမဆွဲ ပဲ ယက်တောင်ကြီးခေါင်းမှာထိုးပြီးလျှောက်သွားနေတဲ့ ဘ၀ရောက်သွားမှာစိုးလို့..စေတနာနဲ့ပြောတာနော်..... ( OEC )
14 December 2011 18:49
ဒါဆိုမင်းကို ငါတစ်ခုပဲမေး မယ် ခုလိုဆန္ဒပြနေတဲ့ဘုန်းကြီးလက်သီးလက်မောင်တန်းပီး ဖျက်လို့ ဖျက်ဆီးလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ လမ်းဘေးမှာ ဆဲေ၇းတိုင်းထွာဆန္ဒပြနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ သာသနာအလံကိုင်းပီး ဆူပူမှု့ လုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလုပ်ရပ်ဟာမှန်လားမှားလား မင်းဖြေစမ်းပါအုံး ခုလုပ်ရပ်တွေဟာ ဘုန်းကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်သင့်လားမလုပ်သင့်ဘူးလား မင်းဖြေစမ်းပါအုံး တင့်သင့်မတင်သင့်ကိုငါမမေးသေးဘူး တင်ထားတဲ့ပုံထဲကလုပ်ရပ်တွေဟာဘုန်းကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်သင့်လားမလုပ်သင့်ဘူးလား ဆိုတာပဲပြန်ဖြေစမ်းပါကွာ ငါဖြေမဲအဖြေကိုစော
22 May 2012 01:46
ဟေ့ကောင်ကိုကိုနိုင်ငံတစ်ခုမှာ စစ်တပ်မရှိရှင် အကုန်သေကုန်လိမ့်မယ်။ မင်းအမေနဲ့ အမကို နိုင်ငံခြားသားက လာလိုးလိမ့်မယ်။ အမေစုလိုပေါ့ကွာ - နော်။ပြည်သူငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေရဖို့ ငါတို့ အသက်တွေ၊ ခနဓာအစိတ်အပိုင်းတွေ အရေအတွက်ဘယ်လောက်ထိပေးခဲ့ရသလဲ။ အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံခြားသားမလိုးခင်ကတဲကကွ .
3 August 2012 08:57
ခွေးကျိုး သံဃာတွေက ဘုရားကို ရှိခိုးတာပါ.. မာတုဂါမကို ရှိခိုးတာဟုတ်ဘူးလေ.. ခွေးကျိုးလေးရဲ့ ..
ပြည်သူ့ချဉ်ပတ်ရဲ့ လက်တလော ရလဒ်တွေ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး
နေပြည်တော် မေ ၂၂
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ပထမဆုံး တရားဝင်အလုပ်သဘော ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် အထက်လွှတ်တေ...